Madaxweyne Farmaajo oo fariin ku saabsan bisha Ramadaan u diray shacabka Soomaaliyed | Allbanaadir
Madaxweyne Farmaajo oo fariin ku saabsan bisha Ramadaan u diray shacabka Soomaaliyed
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi farmaajo ayaa hambalyo ku aaddan bisha barakeysan ee Ramadaan u direy dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo Muslimiinta caalamka meel kasta oo ay joogaan.
“Ramadaan Kariim ayaan leeyahay dhammaan Muslimiinta meel kasta oo ay joogaan, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed. Bishan waa bishii kheyrka, waa bisha ay ku jirto habeenka kheyrka badan ee Leylatul Qadriga. Waa bishii towbada, cafiska, sheydaanka oo la xiro, dadka oo naarta laga xorreeyo iyo kheyr kale oo farabadan. Waxaana Ilaahay ka baryayaa in intaas oo dhan uu ina siiyo, fadliga bishan barakeysan ee Ramadaan awgeed’’ ayuu yiri Madaxweynaha.
‘’Waxaan farayaa dadka Soomaaliyeed inay is kaalmeeyaan. Kuwiina liita ee Muslimiinta ah ee soomaya ee aan waxba haysan waa in la kaalmeeyaa. Aan garab istaagno dadkaasi, yeyna afurin xilli uu walaalkaaga Soomaaliyeed oo maalintii dhan soomanaa uusan haysan wax uu ku afuro. Waa inaan garab istaagnaa, waxna ka siinaa waxa aan haysano, si uu Ilaahay inoogu naxariisto’’ ayuu intaa ku daray Farmaajo.
Dhinaca kale, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa isna u diraya Hambalyo ku aadan bilashada bisha barakaysan ee Ramadan dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan.